May 1, 2019 - CeleLove
May 1, 2019 Cele Love 0
အသက် ( ၅၀ ) မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင် အသက် ( ၃၀ ) မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားသင့်ပါပြီ အသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ် …။ အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်၃၀တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်သင့်ပါပြီ..! #၁. […]
တောင်ကြီး(၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံ မိပြီး ဘာကြောင့်သတ်ရလဲဆိုတာ ထွက်ဆို
တောင်ကြီး(၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံ မိပြီး ဘာကြောင့်သတ်ရလဲဆိုတာ ထွက်ဆို တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများဖော်ထုတ်နေပြည်တော်၊ မေ ၁ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ […]
Facebook က .ရည်းစားရှာဖွေရေး …အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု ..ထည့်သွင်းပေးတော့မည်
Facebook က .ရည်းစားရှာဖွေရေး …အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု ..ထည့်သွင်းပေးတော့မည် Facebook မှာ သင်ကြွေနေတဲ့ စကီလေးတွေကို အသိပေးနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို Facebook Dating မှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီက F8 Developer Conference မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ အမည်က Secret Crush […]
အိမ်တွင်းက ကြွက်တွေကို သဘာဝနည်းနဲ့ အလွယ်တကူ မောင်းထုတ်နည်း
အိမ်တွင်းက ကြွက်တွေကို သဘာဝနည်းနဲ့ အလွယ်တကူ မောင်းထုတ်နည်း အစားအစာရှိတဲ့နေရာမှာ ကြွက်တွေ ပျော်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် အစားအစာ လွယ်ကူတဲ့နေရာမျိုးဆို မိသားစုလိုက် အုပ်လိုက်ကျင်းလိုက် နေတတ်ပါတယ်။ ကြွက်က လူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသားပါ။ တစ်ချို့က ကြွက်ကို ထောင်ခြောက်နဲ့ဖမ်းပြီး သတ်ကြပါတယ်။ […]
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ […]
သင့်မှာ ဒီလို ပြဿနာတွေ ရှိနေရင် ကြက်သွန်ဖြူ ကို မစားပါနဲ့ (သို့) ကြက်သွန်ဖြူဆိုးကျိုး……
သင့်မှာ ဒီလို ပြဿနာတွေ ရှိနေရင် ကြက်သွန်ဖြူ ကို မစားပါနဲ့ (သို့) ကြက်သွန်ဖြူဆိုးကျိုး…… ကြက်သွန်ဖြူ အစိမ်းဟာ ရောဂါ အမျိုးမျိုး ကုသဖို့ အတွက် ရိုးရာ ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် …. ။သွေးတိုးတာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကိုလက်စထရော နဲ့ သွေးကြောကျဉ်းတာ […]
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ထူးခြားချက်များဖတ်ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ထူးခြားချက်များဖတ်ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့၏ထူးခြားချက်များ ရန်ကုန်မြို့ဟာကမ္ဘာပေါ်က တခြားမြို့ကြီးတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားချက် များစွာရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေလာလည်ရင်လည်းကိုယ့်မြို့အကြောင်းကိုယ်ရှင်းပြလို့ရတာပေါ့နော် …. ။ ၁-မြို့အမည်ထူးခြားချက် ရန်ကုန်မြို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဦးအောင်ဇေယျ ခေါ်တဲ့အထက်အညာကတောသားတယောက်ပေးခဲ့တာပါ။ထူးခြားတာက ရန်ကုန်သားတွေဟာတောသားကို ကြည့်မရပေမယ့်တောသားပေးတဲ့နာမည်ကိုသိပ်သဘောကျကြပါတယ် …. ။ ၂-မြို့တော် တကယ်တော့နေပြည်တော်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလို့ ရုံးထိုင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာနေပြည်တော်ပါ။ တရားဝင်လည်းကြေညာပြီးသားပါ။ဒါပေမယ့်အခုအထိ ရန်ကုန်သားတွေကဘယ်သူမေးမေးရန်ကုန်မြို့တော်လို့ပဲ ထင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် …. ။ ၃-တောသား […]
လက်ဖြတ်ပစ်ရတော့မယ့် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြပါဦး ….
လက်ဖြတ်ပစ်ရတော့မယ့် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြပါဦး …. အရိုးကင်ဆာကြောင့်လက်ဖြတ်ရတော့မယ့် ကလေးလေး:) သားလေးနာမည်ကပြည့်ဖြိုးလင်း အသက်က၄နှစ်ပဲရှိပါသေး တယ်။သားလေးကလွန်ခဲ့တဲ့၎လကညာဖက်လက်မောင်းက အရမ်းရောင်လာလို့ င်ဆာလက်ဖြတ်ရမယ် ။ ကလေးဝမြို့ နယ်၊ကျွဲကူးရွာကနေ မန္တလေးကုတင် ၅ ၅၀ကလေးဆေးရုံမှာ ဆေးလာကုနေရပါတယ် ။ ဆရာဝန်များက သားလေးရောဂါ […]
တင်ပါးကျစ်လစ်လှပစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဝေမျှလိုက်တဲ့ ကာယဆရာမလေး
တင်ပါးကျစ်လစ်လှပစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဝေမျှလိုက်တဲ့ ကာယဆရာမလေး ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေ အကြားနာမည်ကြီးနေသူလေးရှိပါတယ်။ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့ မသိသူမရှိသလောက်ပါ။သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Shim Euddeum ပါ။Body အချိုးအစားအပြင် perfect ဖြစ်တဲ့ တင်ပါးအလှနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးတစ်ဦးပါ …။ အားကစားကိုတော့ နှစ်သက်ခုံမင်သူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ IG မှာဆိုရင် […]
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံတစ်ဦးဖမ်းမိ
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု တရားခံတစ်ဦးဖမ်းမိ တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ မသင်္ကာသူကို ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီအချိန်တွင် တရားခံ တင်အုန်း(ခ)အိုက်အုံးအား ကျောက်မဲ မြို့နယ်၊ အထက်မြင်းကွင်းကျေးရွာရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကနဦးစစ်ကြောချက်အရ တရားခံ တင်အုန်း(ခ)အိုက်အုံးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး […]